Emangalisa Insight kuCoronavirus Panic kaDkt. Wolfgang Wodarg? : UMartin Vrijland
UWolfgang Wodarg udokotela waseJalimane nosopolitiki be-SPD. Njengosihlalo woMkhandlu WePhalamende weKomidi Lezempilo loMkhandlu WaseYurophu, uWodarg wasayina isinqumo esihlongozwayo ngoDisemba 18, 2009, okwadingidwa ngaso isikhashana empikiswaneni yezimo eziphuthumayo ngoJanuwari 2010. Ubuye wacela ukuthi kuphenywe ngezinsolo ezingekho emthethweni zezinkampani ezenza amakhambi ngomkhankaso womkhuhlane weH1N1 womhlaba jikelele.
Omunye umsindo we-coronavirus
UDkt. UWodarg uthi kukhona ukukhuluma ngemiphumela yenganekwane "Umbusi akazigqokiLapho kungekho owesibindi sokusho khona ukuthi inkosi ayizigqokile izingubo. Akekho owaba nesibindi sokuvuma ukubona lokhu; ngaphandle komfana omncane. Wonke umuntu wabonakala enqotshwa ukucindezela kontanga.
Lo mlayezo kungenzeka ukuthi uxoshwe njengezindaba ezingezona iqiniso ngabezindaba abahamba phambili noma noma zivunyelwe ngokuphelele yi-Facebook. Noma ingabe uFacebook uzovumela lo mlayezo? Ngizokukhombisa isizathu sokuthi ngichaze ngaphansi kwendatshana.
Ngaphansi kukahulumeni wobukhomanisi wezobuchwepheshe wesikhathi esizayo, cishe uzokuzwa udaba olulodwa. Ngemuva kwalokho kufanele ulalele iqiniso elibekiwe le-politburo. Ukuthi umbuso wobukhomanisi obunjalo lobuchwepheshe manje ususenzeka ngokushesha, ngaphansi kokuzenzisa kwe-coronavirus, ngichaza ngokuningiliziwe lesi sihloko.
Ngokunambitheka kwami, sifakaza ukuhlangana kwabo bonke abaholi bomhlaba lapho ukuqubuka kwe-coronavirus okuyi-PsyOp (ukuhlinzwa kwengqondo) okwakusebenzisa ukonakala komnotho futhi kufinyelela izinhloso engizibekile leso sihloko chaza. Ngabe lokho kusho ukuthi i-coronavirus ayikho? Cha, lelo coronavirus kungenzeka likhona. Kodwa-ke, lokho akubeki ukuthi kungaba yi-bioweapon eyenziwe ngonembeza. Kungenzeka futhi ukuthi ukulimala kwaso kube hyped ngokweqile.
Sikubona sekwenzeka 'i-master script' engiyichaza encwadini yami. Manje njengoba usubonile ukuthi ngenze izibikezelo eziningi ezilungile, sekuyisikhathi sokulahla isihlava sokucabanga kokuzungulela nokuyazi ngempela leyo 'master script', ukuze ukwazi ukubona ukuthi kwenzekani futhi kusukela manje ungathatha isikhundla sokuphikisana. Encwadini yami ngivele ngabikezela ukuthi kuzoba nobunye ubhubhane onjengalo. Sicela ufunde leyo ncwadi bese ufunda ngezansi lesi sixhumanisi izengezo encwadini.
Imbiza yezinyosi, ukuphikiswa okulawulwayo
Kungenzeka ukuthi uDkt. I-Wodarg isetshenziselwe ukuletha umsindo obucayi ngokuphelele (bona ividiyo ngezansi); umsindo obucayi ocishe uthinte iqiniso, kepha ubonise ngamabomu iziphambeko, ukuze kuthi kamuva zihoxiswe njengezindaba ezingamanga. Isibonelo, ukucubungula imidiya yezenhlalo kungasungulwa futhi iwebhusayithi enjenge-martinvrijland.nl ingaphoqeleka ukuthi ivale (ukube bengiyengadi kuyo). Umdlalo udlalwa ngendlela enobuchopho.
Inhloso yalelo su? Zama ukukholisa wonke umuntu ukuthi noma yini engeyona eyejwayelekile izindaba zabezindaba izindaba ezingamanga.
Le ndlela ibizwa ngokuthi isu 'lembiza yezinyosi'; isu lapho izinsizakalo zibeka khona isicupho ngokuxuba iqiniso le-95% nolwazi olungalungile bese liqala (uqobo) nge-pawn (ukuphikiswa okulawulwayo). Ngakho-ke angikwazi ukusho ngokuqiniseka okuyi-100% ukuthi ngabe indaba kaDkt. UWolfgang Wodarg ulungile ngokwezibalo. Ngingavuma kuphela ukuqonda kwami ​​uqobo. Ungathola lokhu kukuqonda lapha kuwebhusayithi nasencwadini yami.
Noma kunjalo, kuyafundisa futhi ukuqaphela izindlela ezilawulwa ezifana nalezi 'zembiza yezinyosi' eziphikisiwe Uzozwa cishe lonke iqiniso, kepha uzofakwa ubuthi ngenkohliso encane, ukuze kuthi ekugcineni ingane ephethe amanzi okugeza ichithwe.
UMartin Vrijland uhlolwe ukuthi une-coronavirus covid-19
Amathegi: i-aan, Okunye, i-communism, coronavirus, UDkt, afakiwe, geen, umsindo, unayo, hype. le, umbusi, ukubhuqa, izingubo, ezombusazwe, psyop, kwezobuchwepheshe, I-Wodarg, Wolfgang
21 March 2020 ku-10: 18
Kuyamangaza ukubona ukuthi osopolitiki (uma ubheka eNetherlands) bonke basekhasini linye. Ukusuka kwesobunxele uye kwesokudla, bonke bahlanganyela kwi-hype. Umehluko usesendleleni kuphela, lapho amaqembu ngakwesokunene nangakwesobunxele efuna ukuvala okuphelele futhi amaqembu athintekile afuna ukuvala okulinganiselayo. Kepha ngokomqondo konke basescebeni futhi bonke bayabamba iqhaza. okufanayo kuyasebenza kwabezindaba, akekho ongabaza ukuthi igciwane le-corona libi kakhulu nokuthi ngabe izindlela azincishisi yini (isibonelo, i-1000x).
Kodwa-ke, kukhona abantu abase-NL (mhlawumbe esingaphezu kwalokho esikucabangayo) abanokungabaza okungathí sina noma okungatheni ngokwenzekayo, futhi uJensen uqoqelwe lokho. UJensen angabamba abangabazayo kanye nabantu abangakukholwa, angakwazi ukufeza umsebenzi “wethosi lezinyosi” eNetherlands kubantu abangakukholwa.
Kungani abantu benza lokhu? UJensen ukhuluma iqiniso eliningi ku-podcast yakhe, kepha iqiniso lokuthi okushisayo okubandayo kuza lapho ekhombisa ukuthi kungani abakhethi bomhlaba bekhipha le coronavirus: Uthi kungenxa yokuthi uTrump kufanele anqotshwe, futhi ngoba "Right" (ngakho-ke anti globalism) wayewina futhi lokho kumele kwehlulwe kube kanye kanye nokukhishwa kobushiqela bokulwa nobumbumbulu.
Ngakho ubamba abangabazayo nabantu abangakukholwa abese ebathumela ehlathini.
21 March 2020 ku-10: 51
IJensen ilayini wokugcina futhi kufanele ibambe abafundi kude neVrijland. Uqhubeka nje athengise uTrump njengeqhawe. Cha, bengilokhu ngiyibhala iminyaka: bonke osopolitiki kusuka kwesobunxele kuye kwesokudla bangama-maski ahlukene ebusweni obufanayo. UJensen akakaze angibhekise kimi. Akekho onesibindi futhi ongabhekisa kimi nencwadi yami. Lowo usongo olukhulu kubo.
21 March 2020 ku-11: 02
Ngeshwa, abantu abaningi bakhahlela kulesi “sicabucabu sangemuva” esilawulwayo.
21 March 2020 ku-13: 08
Mhlawumbe ababeke amazwana bangathumela amazwana lapha ku-podcast ye-YouTube ye-youens enesixhumanisi saleli sayithi. Mhlawumbe wonke lawo mazwana azosuswa ngokucophelela ngokushesha, kodwa uma kungenjalo, kungenzeka njalo ukuthi abanye bazophela lapha.
Inhloko yezinhlanzi wabhala:
21 March 2020 ku-11: 39
UMartin uya ngokuya elungile
Usale kahleBabylon wabhala:
21 March 2020 ku-12: 16
Ekhuluma ngokuphikiswa okulawulwayo, uJensen akayona neyodwa yazo
« Ungabhekana kanjani nezinyathelo ze-coronavirus (ukukhiya): izeluleko ezisebenzayo
Funda okufanele ukwenze nokuthi yini okufanele ukwenze kufaka ukuvala okulandelayo kwe-coronavirus »
Ukuvakashelwa okuphelele: 1.405.044
Ikusasa op ICoronavirus covid-19 nesayensi: Ungena kanjani emzimbeni wakho futhi uwudlulisela kanjani?
SandinG op ICoronavirus covid-19 nesayensi: Ungena kanjani emzimbeni wakho futhi uwudlulisela kanjani?